Imisebenzi yezandla yangempela engama-15 yezingane ezisukela eminyakeni emi-6 kuye kwengu-12 ubudala | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Imisebenzi yezandla yezingane ezisukela eminyakeni emi-15 kuye kwengu-6 ubudala
Elizabeth Catalan | | Yezandla, Imisebenzi yezandla yezingane
Njengoba izingane zikhula amakhono azo ayakhula, ngakho-ke sekuyisikhathi sokubabonisa ubuciko obusha obunzima kakhulu ukuze bakwazi ukuthuthukisa ubuhlakani babo futhi banelise ilukuluku labo. Ngaphezu kwalokho, kule minyaka yobudala bangakwazi ukudala eziningi zazo bodwa ngaphandle kokuqondiswa umuntu omdala, ngakho-ke isipiliyoni sokwenza umsebenzi wobuciko ngokwabo sibajabulisa kakhulu futhi sibajabulise.
Nayi imibono eminingana ye- yezandla izingane ezineminyaka engu-6 kuya kwengu-12 ukuze badlale esikoleni nabangane babo noma benze idili lokuzalwa. Bazoba nokuqhuma!
1 Slingshot ukwenza nezingane
2 Ibhande lasekhanda elinezindlebe zepompo lokwenza nezingane
3 I-Carnival EVA izibuko zokwenza nezingane
4 Incwajana yokubhalela ehlotshiswe nge-EVA rubber
5 Ikhadibhodi lekhadibhodi nekhabethe
6 Iminenke enemibala eyenziwe ngophayinaphu
7 Imbiza yomhleli wepensela wezingane
8 Ama-slippers ahlobisiwe ehlobo
9 Iphazili lezemfundo ngezinduku zobuciko
10 Isikhwama sepensela esingasindi sasilula
11 Izilwane ezihlekisayo ezinezinti zokhuni
12 Iziphakeli zezinyoni ezinamathini asetshenziswe kabusha
13 Uyenza kanjani inhlanzi ngama-CD asetshenziswe kabusha nephepha le-crepe
14 Izinyoka ezenziwe ngamapompo
15 Isongo nendandatho enamabhande enjoloba
Slingshot ukwenza nezingane
Uma ufuna ubuciko obulula bokukwenza ngokushesha ngesikhathi sokukhathazeka, lesi isihlilingi esinemiqulu yamaphepha kanye namabhaluni anemibala kuyindlela enhle. Ngeke udinge izinto eziningi futhi nezingane ezineminyaka engu-6 nangaphezulu zingenza inqubo ngokwazo njengoba zinokuzimela okuningi kunezincane.
Ukubona zonke izinyathelo zalobu buciko bezingane ezisukela eminyakeni eyisithupha kuya kwengu-6 ubudala, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Slingshot ukwenza nezingane. Ngeke nje babe nokuningi kokuzijabulisa ekwakheni lesi slingshot kodwa futhi bazodlala ngemuva kwalokho!
Ibhande lasekhanda elinezindlebe zepompo lokwenza nezingane
Lo msebenzi wobuciko wezingane kusuka eminyakeni eyisithupha kuya kwengu-6 uphelele ukunika izivakashi emcimbini wosuku lokuzalwa noma ukuwugqoka njengengxenye yemvunulo yesilwane. Izinto zokwakha lo msebenzi wobuciko zitholakala ekhaya (uboya, amakhadibhodi, isikele, ikamu ...) okuwukuphela kwento oyodinga ukuyithenga kuzoba amabhande ekhanda asobala ngombala ofana noboya.
Ukwazi ukuthi ungazenza kanjani, ungaphuthelwa inqubo eposini Ibhande lasekhanda elinezindlebe zepompo lokwenza nezingane. Nakhu kufika konke kuchazwe igxathu negxathu.
I-Carnival EVA izibuko zokwenza nezingane
Ngoba lapho iCarnival isondela, lokhu kungenye yemisebenzi yezandla okufanele uyicabangele ukuyenza ngoba ilula kakhulu futhi iyashesha ukwenza. Ilungele izingane ezineminyaka engaphezu kwengu-6 ubudala kodwa kwabancane kuyalulekwa ukuthi kube nokuqondiswa komuntu omdala.
Lezi izibuko ezinenjoloba ye-EVA Banesimo senhliziyo kepha empeleni ungakhetha leyo oyithandayo kakhulu noma evumelana kahle nemvunulo ingane efuna ukuyigqoka, njengezinkanyezi noma izingilazi eziyisikwele. Uma ufuna ukubona ukuthi zenziwa kanjani ungaphuthelwa okuthunyelwe I-Carnival EVA izibuko zokwenza nezingane.
Incwajana yokubhalela ehlotshiswe nge-EVA rubber
Ukubuyela esikoleni kuyasondela futhi sekuyisikhathi sokulungisa zonke izimpahla zesikole izingane ezizodinga unyaka ozayo. Ungenza ngezifiso ezinye zezinto ngokuzihlobisa ngenye indlela ngobuciko obuncane, ngokwesibonelo ukuphinda usebenzise ilogo kaMinnie Mouse ezincwadini zabo zokubhalela.
Izinhlamvu zeDisney yizintandokazi zezingane eziningi. Ngeke udinge izinto eziningi ukwenza lo mklamo encwadini yokubhalela. Ngaphezu kwalokho, ingane ingenza iningi lenqubo yodwa. Kungakho ingenye yezandla ezilula ezinganeni ezisukela eminyakeni eyisithupha kuya kwengu-6 ubudala.
Ukubona ukuthi kwenziwa kanjani ngincoma ukuthi ubheke okuthunyelwe Incwajana yokubhalela ehlotshiswe nge-EVA rubber.
Omunye wemisebenzi yezandla ebanda kunazo zonke izingane ezineminyaka eyisithupha kuya kwengu-6 ukwenza lokhu amakhadibhodi nekhabethe le-crepe. Akuthathi isikhathi eside ukukwenza futhi ungasebenzisa ezinye izinto osunazo ekhaya ezifana neglue yephepha, omaka abamnyama, isitoko sekhadi nephepha le-crepe. Kuphelele ukwenziwa nganoma yisiphi isikhathi nezingane ikakhulukazi uma kubanda noma lina futhi kunamathuba amancane okuphumela ngaphandle ukuyodlala.
Ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani igxathu negxathu, ungaphuthelwa okuthunyelwe Ikhadibhodi lekhadibhodi nekhabethe lapho kuchazwa kahle khona ukuthi ungalwenza kanjani loluvemvane oluhle.
Iminenke enemibala eyenziwe ngophayinaphu
Omunye wemisebenzi yobuciko ehlekisa kakhulu yezingane ezineminyaka engu-6 kuya kwengu-12 ubudala ukuhlobisa amakamelo ezingane ukwenza lezi iminenke enophayinaphu ukuthi ukwazile ukuqoqa emkhakheni. Kuyindlela yangempela yokunikeza lawa phayinaphu ukusetshenziswa okusha.
Ukwenza le minenke enemibala uzodinga kuphela amakhadibhodi amancane, upende othile we-acrylic, umaka omnyama nosiliconi omncane oshisayo lapho izingane zizodinga usizo ngalesi sinyathelo. Eposini Iminenke enemibala eyenziwe ngophayinaphu Ungathola ividiyo ngayo yonke inqubo yokwenza lo msebenzi wobuciko.
Izingane ziyakuthanda ukudweba futhi zihlala zithambekele ekuqongeleleni inani elikhulu lamakhrayoni, amapensela kanye nomaka ekugcineni abagcina bezungeza indlu. Ukugwema lokhu futhi ube nayo yonke imidwebo endaweni eyodwa ngaphandle kokulahleka, akukho okungcono kunokwenza lokhu Umhleli wepensela wezingane.
Phakathi kwezandla zezingane ezineminyaka engu-6 kuya kwengu-12 ubudala, lokhu kungenye yezinto ezilula futhi ezijabulisa kakhulu ukuzenza. Ngaphezu kwalokho, kuzokuvumela ukuthi usebenzise kabusha izinto osunazo ekhaya, njengezinti ze-ayisikhilimu ozidlile kuleli hlobo. Esikhundleni sokubalahla, basindise futhi ungafundisa ukuthi ungakwenza kanjani lokhu izingane ipensela umhleli imbiza.
Lona izikebhe ezinhle kakhulu izingane ezindala ezizenzayo futhi bangagqoka amateki amahle apholile kuleli hlobo. Ungasiza abancane ukwenza imidwebo futhi bazothanda nokuyiphatha. Lo mklamo ulula kakhulu futhi uzodinga kuphela izimpawu ezimbili ezibomvu neziluhlaza zendwangu namanye amateki amhlophe.
Eposini Ama-slippers ahlobisiwe ehlobo Ungathola ividiyo yokwenza lo msebenzi wobuciko wezingane ezineminyaka engu-6 kuye kwengu-12 igxathu negxathu.
Iphazili lezemfundo ngezinduku zobuciko
Ukusizakala ngezinto ezithile ezisalile onazo ekhaya njengezinti ezithile zokhuni eziza nama-ayisikhilimu ungakulungiselela lokhu izikebhe ezilula lapho izingane zizoba nesikhathi esihle.
Ngeke uze udinge izinto zokwakha, izinti ezimbalwa nje, amakhrayoni athile kanye nentshiseko encane. Ku-puzzle, izingane zingathuthukisa umcabango wazo futhi zidwebe konke okuza engqondweni: izimbali, izilwane, izithelo, amaplanethi ...
Uma ufuna ukubona ukuthi yenziwa kanjani kusuka ekuqaleni, ungaphuthelwa okuthunyelwe Iphazili lezemfundo ngezinduku zobuciko.
Ngamakilasi aseduze kwekhoneni, lokhu kungumphelelisi ophelele kubuciko be-EVA Notebook engikhulume ngabo phambilini. engasindi wezwa ipensela ikesi, omunye wemisebenzi yezandla ebanda kunazo zonke ezinganeni ezineminyaka esukela kwengu-6 kuye kwengu-12 ezingazenza kalula ngosizo lwakho.
Kuphelele ukuphatha isikhwama esikhwameni noma ukugcina amapensela etafuleni futhi uwagcine ehlelekile. Eqinisweni, leli cala liqinile kangangokuba kuthatha cishe isikhala futhi izingane zizowuthanda umphumela. Uma ufuna ukubona ukuthi kwenziwa kanjani igxathu negxathu, ungaphuthelwa okuthunyelwe Isikhwama sepensela esingasindi sasilula.
Okulandelayo ngomunye wemisebenzi yezandla yokudala nokujabulisa izingane ezineminyaka esukela kwengu-6 kuye kwengu-12 izingane ezingayenza ngokuvuselela izinduku ze-ayisikhilimu ezisele nezinye izinto osunazo ekhaya njengamakhadibhodi anemibala, omaka, amapensela, izikele, njll.
Lo mkhakha uqukethe ukwenza amanye izilwane ezincane ezinhle ezinezinti zokhuni. Eposini Izilwane ezihlekisayo ezinezinti zokhuni Ungathola ividiyo echaza inqubo yokukhiqiza yokwenza inhlanzi, iphuphu, idayinaso ... nangomcabango omncane, ngubani owaziyo ukuthi yiziphi ezinye izidalwa ongazakha. Okuqinisekile ukuthi uzoba nesikhathi esimnandi!
Iziphakeli zezinyoni ezinamathini asetshenziswe kabusha
Uma emndenini wakho uthanda ukusebenzisa kabusha ukunakekela imvelo nemvelo, lapha unebhizinisi elihle kakhulu ozothanda ukuhlobisa ingadi futhi bondle izinyoni ezincane. Ngosizo lwakho, ungomunye wemisebenzi yobuciko ehlekisa kakhulu yezingane ezineminyaka eyisithupha kuya kwengu-6 ongazenza ndawonye.
Izimpahla zilula ukuza: amathini ambalwa okudla, irabha ye-EVA, upende, intambo ethile nobuhlalu. Ukubona ukuthi kwenziwa kanjani ungafunda okuthunyelwe Iziphakeli zezinyoni ezinamathini asetshenziswe kabusha.
Uyenza kanjani inhlanzi ngama-CD asetshenziswe kabusha nephepha le-crepe
Uma unemizuzu engama-20 nama-CD ambalwa ungakwenza lokhu izinhlanzi ezimibalabala zokuhlobisa igumbi kwabancane. Lokhu kungenye yezandla ezisheshayo futhi ezilula ezinganeni ezisukela eminyakeni engu-6 kuye kwengu-12 ongazifundisa izingane ukuba zenze isikhathi esimnandi.
Eposini Uyenza kanjani inhlanzi ngama-CD asetshenziswe kabusha nephepha le-crepe Ungabona zonke izinto zokwakha kanye nenqubo yesinyathelo ngesinyathelo yokwenza le minnows. Ungaphuthelwa!
Izinyoka ezenziwe ngamapompo
Ingabe unamaphompumu anemibala nobuhlalu endlini? Iphelele! Ngakho-ke ungazisebenzisa ukudala imibala futhi izinyoka ezinhle ongahlobisa ngayo noma iyiphi ikona lezingane lendlu.
Isakhiwo saso silula kakhulu, ubuhlalu namaphompo ahlanganiswe nentambo ukwakha isimo salesi silwane esihuquzelayo. Uma ufuna ukuzama ukukwenza, ngincoma ukuthi ubheke okuthunyelwe Izinyoka ezenziwe ngamapompo lapho uzothola khona yonke inqubo.
Isongo nendandatho enamabhande enjoloba
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungazenza kanjani ezinye namasongo namasongo anamabhande erabha amahle kakhulu ukunikela? Uzodinga kuphela ama-gummies anemibala eminingi nokuvalwa okusobala okufana ne-hook. Uzothola yonke imiyalo kokuthunyelwe Isongo nendandatho enamabhande enjoloba. Ungomunye wemisebenzi yezandla enhle kakhulu yezingane ezisukela eminyakeni eyisithupha kuya kwengu-6 ubudala ukugqoka kuleli hlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane ezisukela eminyakeni emi-15 kuye kwengu-6 ubudala
Izincwadi zokwakha uphawu, iphosta, njll.
Imisebenzi yezandla engu-5 yokubuyela esikoleni, ingxenye 2